सगरमाथा कस्ले नाप्ने?
सगरमाथा कस्ले नाप्ने?
सगरमाथको उचाइ मापन भारतीय नापी विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने भने पनि सरकारले आगामी साउनपछि आफैं नाप्ने गरी तयारी थालेको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचरपत्रबाट लिएका हौ। त्यसका लागि टोकनका रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग १० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिसकिएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ।
सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा फेरि नाप्नका लागि भारतले नेपालसँग केही दिनअघि प्रस्ताव राखेको खबर सार्वजनिक भए पनि यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ८, २०७४ ०५:०३:१४